We Love Burma , We Love Aung San Su Kyi , We Love Democracy .
Original Flag Movement
နအဖက နေပြည်တော်မှာ ဒီလကုန် (၃၁) ရက်နေ့ကြရင် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးလုပ်မယ်လို့ကြေညာပြီးနောက်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေထံ လွှတ်တော်အစည်းအဝေး တက်ရောက်ကြဖို့ဆင့်ခေါ်စာအပြင် ကန့် သတ်ချက်ချက်တွေပါတဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေလည်း ထုတ်ပြန်ပေးပို့ ပါတယ်။
လွှတ်တော်အစည်းအဝေး တက်ရောက်တဲ့အခါမှာ ကွန်ပြူတာ၊ လက်ကိုင်ဖုန်းနဲ့ အသံဖမ်းစက်၊ ကင်မရာ အပါအ၀င် လွယ်အိတ်တွေကအစ သယ်ဆောင်ခွင့် မပြုတဲ့အကြောင်း သူတို့ထံ ပေးပို့တဲ့ ညွှန်ကြားစာထဲမှာ ဖော်ပြထားတယ်လို့ စာလက်ခံရရှိကြတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက ပြောပါတယ်။
နအဖက သတင်းပေါက်ကြားမှာ၊ အဖြစ်မှန်တွေ ပေါ်ပေါက်မှာ ကြောက်လွန်းလို့ဒီလို ကန့် သတ်ချူပ်ချယ်မှုပေါင်း မြောက်မြားစွာ ထုတ်ပြန်ပြီး စာနယ်ဇင်းတွေ၊ ရေဒီယိုတွေ၊ ရုပ်မြင်သံကြားတွေမှာ ဆင်ဆာဖြတ် ကန့် သတ်ပိတ်ပင်တာတို့လုပ်နေကြ ဖြစ်ပါတယ်။
အခု သန်းရွှေတို့နဖအလက်ထက် မတိုင်ခင်ကတည်းက အာဏာရှင်ဆန်ဆန်ကျင့်သုံးကြတဲ့ မဆလ န၀တ လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွေ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးတွေအကြောင်းဟာ သူတို့ ရဲ့ဝါဒဖြန့် သတင်းစာထဲမှာ စိတ်တိုင်းကျ ပြင်ဆင်ရေးသားထားတဲ့ သတင်းတွေနဲ့ဓါတ်ပုံတွေလောက်ဘဲ မြင်တွေ့ ကြရတာပါ။
အောက်ဖေါ်ပြပါ ပုံကတော့ တစ်ပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကို ၁၉၆၂ ခုနှစ်ကနေ ၁၉၈၈ ခုနှစ်အထိ နှစ်ပေါင်း (၂၆) နှစ်ကြာ ကျင့်သုံးအုပ်ချူပ်ခဲ့တဲ့ နေ၀င်း ဦးဆောင်တဲ့ မဆလအစိုးရလက်ထက်မှာ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကျင်းပနေတုန်းက မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာရူး သန်းရွှေရဲ့လက်ဦးဆရာကြီး အာဏာရူးကြီး နေ၀င်းလက်ထက်မှာလည်း ၀ါဒဖြန့် ချီရေး သတင်းစာတွေမှာ သတင်းအကန့် အသတ်အပြင်အဆင်တွေနဲ့စီမံထားပြီးမှ ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ကျင်းပနေတဲ့ ဓါတ်ပုံ ဖြစ်ပါတယ်။
လွတ်တော်အစည်းအဝေးအတွင်းမှာ ဘယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက ဘာပြောဆိုဆွေးနွေးကြသလည်း၊ ဘယ် ၀န်ကြီးတွေက ဘာတွေ တင်ပြပြောဆိုကြသလည်း၊ သမတတို့ဝန်ကြီးချူပ်တို့ က ဘာတွေ ဆောင်ရွက်စီမံထားကြတာရှိသလည်း အစရှိတဲ့ ပြည်သူတွေ သိသင့်သိထိုက်တဲာတွေကို လုံးဝအလျဉ်း သိခွင့်မရကြသလို၊ ပြည်သူတွေက သူတို့သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေဒေသမှာ လိုအပ်ချက်တွေကို ပြည်သူ့ ကိုယ်စား ရွေးချယ်ပေးတာဝန်ပေးအပ်လိုက်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေက လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေမှာ ပြည်သူ့ ကိုယ်စား တင်ပြပြောဆိုပေးမှု ရှိမရှိဆိုတာ သိမြင်ကြားတွေ့ ခွင့် မရှိတဲ့အတွက် အစိုးရရဲ့ လုပ်ရပ်မမှန်ကန်မှုတွေ လွှတ်တော်ကိုယ်စားတစ်ဦးခြင်းစီရဲ့လုပ်ရပ်မမှန်ကန်မှုတွေကို ပြည်သူအများက သိရှိနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဖူး။
ဒီလိုမျိုး အစိုးရအဖွဲ့ ဝင်တွေ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးချင်းစီတွေရဲ့ပြောဆိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုတွေက ပြည်သူတွေ မသိအောင် လုပ်ချင်ရာလုပ်၊ ကိုယ်ကျိုးအလွဲသုံးစားမှုတွေ လုပ်၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုတွေ လုပ်၊ အာဏာရာထူးကို အသုံးချပြီး အခွင့်အရေးတွေ ယူချင်သလိုယူခဲ့ကြလို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးဟာ မဆလလက်ထက်ကစပြီး ယခု နအဖလက်ထက်ထိ နှစ်ပေါင်း (၄၀) ၀န်းကျင် မွဲတေဆင်းရဲခဲ့ကြရတာပါ။
ဒီလိုမျိုး အစိုးရအဖွဲ့ ဝင်တွေ သမတ ၀န်ကြီးချူပ်ကအစ နောက်ဆုံး သာမန်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအထိ မမှန်ကန်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေ မဖြစ်ရအောင် သူတို့ ဘာတွေပြောဆိုဆွေးနွေးလည်း ဘာတွေလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေ ကြသလည်းဆိုတာတွေကို အစဉ်မပြတ် သိရှိနေရအောင် တိုင်းသူပြည်သားတွေကို အသိပေးကြရပါတယ်။
စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့၊ ကျောသားရင်သား မခွဲခြားဘဲ မျှတမှန်ကန်တဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုတဲ့၊ ပြည်သူက မိမိတို့ ဆန္ဒအပြည့်အ၀နဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပေးခဲ့တဲ့ ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ်စစ်စစ်တွေ စီမံအုပ်ချူပ်တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် သတင်းမှောင်ချဖို့ နေနေသာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဘာတွေ ပြောတယ် ဆွေးနွေးကြတယ် ဘာတွေ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြတယ်ဆိုတာ ပြည်သူကို အပြည့်အစုံတင်ပြ အသိပေးကြရပါတယ်။
လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ကျင်းပမှုတွေကို တစ်နိုင်ငံလုံးက ပြည်သူပြည်သားတွေ အချိန်မရွေး သိရှိနိုင်ကြရအောင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပေးရပါတယ်။ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာပင်လျှင် ကျင်းပနေချိန်နဲ့တပြိုင်နက် နားထောင်ကြည့်ရှူနိုင်ဖို့ ကိုလည်း စီစဉ်ပေးကြပါတယ်။ Parliament Sitting လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ကြတဲ့ လွှတ်တော်အစည်းအဝေး နေ့ ရက်အချိန်ကာလတွေမှာ ပြည်သူတွေအနေနဲ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးခန်းမအတွင်းမှာ ၀န်ကြီးချူပ် ၀န်ကြီးတွေ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမတ်တွေ ပြောဆိုဆွေးနွေးနေကြတာကို ပြည်သူတွေအတွက် သီးသန့် သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ နေရာတွေကနေ နားထောင်ကြည့်ရှူနိုင်ကြပါတယ်။
လွှတ်တော်အစည်းအဝေးခန်းမအတွင်းမှာ ၀န်ကြီးချူပ် ၀န်ကြီးတွေ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမတ်တွေ ပြောဆိုဆွေးနွေးနေကြတာကို လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ကျင်းပနေစဉ်မှာဘဲ ရေဒီယိုတွေ ရုပ်မြင်သံကြားတွေကနေ တိုက်ရိုက် အသံလွှင့်ပြသကြပါတယ်။
လွှတ်တော်အစည်းအဝေးခန်းမအတွင်းမှာ ၀န်ကြီးချူပ် ၀န်ကြီးတွေ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမတ်တွေ ပြောဆိုဆွေးနွေးချက်တွေကို ဤသည်မရွေး တိုက်ရိုက် အသံလွှင့်တာကို နားမထောင်ဖြစ် မကြည့်ဖြစ်တဲ့ ပြည်သူတွေအတွက်လည်း လွှတ်တော်အစည်းအဝေးအတွင်း တစ်ဦးချင်း ပြောကြားမှုတိုင်းကို အဖြတ်အတောက် အပြင်အဆင်မရှိဘဲ မူလပြောဆိုချက်တွေအတိုင်း မှတ်တမ်းအဖြစ် ထားရှိပြီး ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေ အသံမှတ်တမ်းတွေ စာရွက်စာတမ်း မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေအဖြစ် ထားရှိထားပြီး အစိုးရအင်တာနက်စာမျက်နှာတွေ စာကြည်တိုက်တွေ ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာ ဖတ်ရှူလို့ရအောင် စီစဉ်ပေးကြပါတယ်။
လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ကျင်းပနေတဲ့ ခန်းမအတွင်း ၀င်ရောက်ပြီး အများပြည်သူအတွက် သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ နေရာထိုင်ခင်းကနေ တိုက်ရိုက် ကြည့်ရှူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ အပြင် ဓါတ်ပုံကင်မရာတွေ ဗွီဒီယိုကင်မရာတွေ ပေးယူပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ခွင့်ပေးပါတယ်။ ဒီလို လွှတ်တော်အစည်းအဝေးခန်းမအတွင်းကို နိုင်ငံသားမပြောနဲ့အလည်အပတ်ရောက်ရှိနေကြတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေကိုလည်း ၀င်ရောက်လေ့လာခွင့် နားထောင်ကြည့်ရှူခွင့်ပြုကြပါတယ်။
ပြည်သူတွေအနေနဲ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးခန်းမအတွင်းမှာ ၀န်ကြီးချူပ် ၀န်ကြီးတွေ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမတ်တွေ ပြောဆိုဆွေးနွေးချက်တွေကို တိုက်ရိုက် နားထောင်ကြည့်ရှူခွင့်ရကြတဲ့ အထင်ကရ နိုင်ငံတွေထဲက ကောက်နှုတ်ပြရရင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ စကော့တလန်နိုင်ငံ၊ သြစတြေလျနိုင်ငံနဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံတို့ ကို ဖေါ်ပြလိုပါတယ်။
သြစတြေလျနိုင်ငံမှာဆို၇င် အထက်လွှတ်တော် အောက်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမတွေထဲကို ပြည်သူတွေအနေနဲ့တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက် နားထောင်ခွင့်ရအောင်အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေရာမှာ ထိုင်ခုံပေါင်း (၃၈၈) ခုံ ထားရှိပေးထားပါတယ်။ ရေဒီယို ရုပ်မြင်သံကြားတွေကလည်း ထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့တွက် တိုင်းသူပြည်သားများဟာ နေရာအနှံ့ ကနေ နားထောင်မြင်တွေ့ ကြပါတယ်။
အောက်ဖေါ်ပြပါ ပုံတွေမှာ သြစတြေလျနိုင်ငံရဲ့အထက်လွှတ်တော်အစည်းအဝေး အောက်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေ ကျင်းပနေစဉ် အစည်းအဝေးခန်းမကြီးရဲ့အပေါ်နေရာတွေကနေ ပြည်သူပြည်သား မည်သူမဆို (သြစတြေလျနိုင်ငံကို အလည်ရောက်နေကြတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေကိုပါ) တိုက်ရိုက်အသံနားထောင် ကြည့်ရှူနိုင်ပါတယ်။
ထို့ အတူ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ စကော့တလန်နိုင်ငံနဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွေမှာလည်း လွှတ်တော်အစည်းအဝေါ်ကျင်းပပြောဆိုနေမှုတွေကို တိုက်ရိုက်နားထောင်ကြည့်ရှူနိုင်တဲ့ စီမံမှုတွေ ဆောင်ရွက်ထားပေးပါတယ်။
နအဖက သူတို့လုပ်နေကြအတိုင်း လွှတ်တော်အစည်းအဝေကြီး အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီးသွားပါကြောင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ သတ်မှတ်ချက်တွေ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေနဲ့နအဖပိုင် သတင်းမီဒီယာတွေကနေ အဖြတ်အတောက် အပယ်အဖျက် အပြင်အဆင်တွေနဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရုံမှအပ တစ်ခြားဘာမှ မရှိကြောင်းပါ။
တိုင်းသူပြည်သားတွေကို သတင်းအမှောင်ချနေတဲ့ နအဖသန်းရွှေတို့ ကတော့ နေပြည်တော်မှာ ဒီလကုန် (၃၁) ရက်နေ့ကြရင် သူတို့ ရဲ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ ကိုတောင် ကွန်ပြူတာ၊ လက်ကိုင်ဖုန်းနဲ့ အသံဖမ်းစက်၊ ကင်မရာ အပါအ၀င် လွယ်အိတ်တွေကအစ သယ်ဆောင်ခွင့် မပြုဖူးဆိုတော့ သာမန် တိုင်းသူပြည်သားတွေအနေနဲ့ ကတော့ ပိုပြီး မျက်စိကန်း နားကန်းဘ၀နဲ့တိုင်းပြည်ကို စီမံအုပ်ချူပ်ကြမယ့် နအဖဘ၀ကူးပြောင်းပြီး ပေါ်လာမယ့် အဆိုးရလက်အောက်မှာ ဆိုးရွားလွန်းမယ့် အခြေအနေတွေကို ဆက်ပြီး ရင်ဆိုင်နေကြဦးမှာ တွေးမိတိုင်း ရင်လေးမိပါတယ်။
ကိုနစ်နေမန်း ဘလော့ဂ်မှ ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by FBA301 at 9:49 PM0comments
မကြာခင် စတင် ခေါ်ယူတော့မယ့် လွှတ်တော်အသစ် မတိုင်ခင်လေးမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရွယ်ရောက်သူတိုင်း စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဆိုတဲ့ ဥပဒေကို စစ်အစိုးရက ထုတ်ပြန်လိုက်တာဟာ ဥပဒေပြု အာဏာကို ထိပါးရာ ရောက်တယ်လို့ NLD အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ပြောပါတယ်။ မကြာခင် လပိုင်းအတွင်း စစ်အစိုးရက ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ဥပဒေတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ NLD က ဒီကနေ့ သဘောထား ကြေညာချက် ၂ စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အထဲမှာ အခုလို ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ကိုဇော်ဝင်းလှိုင် က တင်ပြ ပေးထားပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲပြီး နောက်ပိုင်း စစ်အစိုးရက ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေတွေဟာ မကြာခင် ပေါ်ပေါက်လာတော့မယ့် လွှတ်တော်အသစ်ရဲ့ ဥပဒေပြု အာဏာကို ထိပါးရာ ရောက်စေတဲ့အတွက် NLD ဗဟိုဥပဒေ အထောက်အကူပြု အဖွဲ့က သဘောထား ကြေညာချက် ၂ စောင် ထုတ်ပြန် ကြေညာလိုက်တာလို့ NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်၊ ဥပဒေ အထောက်အကူပြု အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်တဲ့ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောပြပါတယ်။
Posted by FBA301 at 9:35 PM0comments
အစိုးရသစ်လက်ထက် မီဒီယာများကို ပိုတင်းကျပ်နိုင်
စစ်အစိုးရ၏ လမ်းပြမြေပုံ ၇ ချက်အရ မကြာမီ လွှတ်တော်များနှင့် အစိုးရသစ် ပေါ်ပေါက်လာမည် ဖြစ်သော်လည်း မီဒီယာများ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် မရရှိနိုင်ဘဲ ပိုမိုတင်းကျပ် နိုင်ကြောင်း သတင်းဂျာနယ် အသိုင်းအ၀န်းက ပြောဆိုနေကြသည်။
စစ်အစိုးရ ထုတ်ပြန်ထားသော လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများတွင် သတင်းမီဒီယာများ၏ သတင်းရယူခွင့်ကို ပိတ်ပင် ထားသည့်အပြင် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များသည် တရားဝင် ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိသော သတင်းအချက် အလက်များ ပြင်ပသို့ ပေါက်ကြားခြင်း၊ ပြောဆိုခြင်း ပြုလုပ်ပါက ဥပဒေအရ အရေးယူခံရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
“လက်ရှိ ဥပဒေတွေ အရတော့ လွှတ်တော် အစည်းအဝေးထဲကို ပုဂ္ဂလိက သတင်းမီဒီယာတွေ တရားဝင် သတင်းယူခွင့်မရှိဘူး။ လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက ခွင့်ပြုမှ ၀င်လို့ရမယ်။ လွှတ်တော် အဆောက် အအုံနားကို ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ကပ်ရင်တောင် ထောင်ကျမယ့်ကိန်း ဖြစ်နေတယ်” ဟု ရန်ကုန်အခြေစိုက် သတင်းမီဒီယာကြီး တခု၏ အမှုဆောင် အယ်ဒီတာ တဦးက ပြောသည်။
လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၂ တွင် လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ကျင်းပနေစဉ် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရှိသော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များမှအပ တခြားမည်သူမျှ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ ၀င်ရောက်ခွင့် မရှိကြောင်း၊ လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ကျင်းပနေစဉ် ခန်းမအတွင်းသို့ လိမ်လည် ပြောဆိုဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် တပါးသူ အယောင် ဆောင် ၀င်ရောက်ခြင်း၊ လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ကျင်းပချိန်ဖြစ်စေ၊ အစည်းအဝေး ကျင်းပချိန် အပ၌ဖြစ်စေ ဥက္ကဋ္ဌ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ လွှတ်တော် ပရ၀ဏ်အတွင်း နေထိုင်ခြင်းများပြုလုပ်လျှင် အနည်းဆုံး ထောင်ဒဏ် တနှစ်၊ ငွေဒဏ် ကျပ်တသိန်း သို့မဟုတ် ဒဏ်နှစ်ရပ်စလုံးချမှတ်နိုင်ကြောင်း တရားဝင် ဖော်ပြထားသည်။
ထို့အပြင် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၃ (စ) တွင် မည်သူမဆို လျှို့ဝှက်စွာ ထိန်းသိမ်း ထားရှိရမည့် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ၊ အကြောင်းအရာများ၊ အချက်အလက်များ၊ ကိန်းဂဏန်းများ၊ ရုပ်ပုံကားချပ်များနှင့် တခြားသော အထောက်အထားများကို ပြင်ပသို့ ပေါက်ကြားစေရန် ပြောဆိုခြင်း၊ ရေးသားခြင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ချိခြင်း သို့မဟုတ် တနည်းနည်းဖြင့် ဆက်သွယ်ပေးပို့ခြင်း မပြုလုပ်ရန် ပြဋ္ဌာန်းထားပြီး ထိုသို့ပြုလုပ်လျှင် အနည်းဆုံး ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်၊ ငွေဒဏ် ကျပ် ၂ သိန်း သို့မဟုတ် ဒဏ်နှစ်ရပ်စလုံးဖြစ်စေ ချမှတ်နိုင်သည်ဟုလည်း ပြဌာန်းထားသည်။
လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များသည် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများတွင် ဆွေးနွေးချက်များကို လွှတ်တော်က တရားဝင် သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိဘဲ ပြင်ပသို့ ပြောဆိုပေါက်ကြားပါက မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရလျှို့ဝှက်ဥပဒေအရ အရေးယူနိုင်သည် ဆိုသော အချက်ကိုလည်း ဥပဒေများထဲတွင် မကြာခဏဆိုသလို ဖော်ပြထားကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
“လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တဦးအနေနဲ့ မီဒီယာတွေမှာ နိုင်ငံရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေး၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေ၊ ကိစ္စတွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောပိုင်ခွင့် မရှိဘူး” ဟု တသီးပုဂ္ဂလ လွှတ်တော်အမတ်လောင်းအဖြစ် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သူ တဦးက ပြောသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၉/ ဂ (၆) တွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တဦးအနေနှင့် နိုင်ငံတော် လျှို့ဝှက်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရ လျှို့ဝှက် အက်ဥပဒေအရ လည်းကောင်း၊ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေဖောက်ဖျက်လျှင် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ လည်းကောင်း အရေးယူခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း ရေးသားထားသည်။
လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များသည် လွှတ်တော်အစည်းအဝေး တက်ရောက်ရာတွင် ကင်မရာ၊ အသံဖမ်းစက်၊ မီးခြစ် အပါအ၀င် တားမြစ်ပစ္စည်း ခုနစ်မျိုးကို သယ်ဆောင်ခြင်း မပြုရဟုလည်း လွှတ်တော် အစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသို့ တရားဝင်ပေးပို့သော ဖိတ်ကြားလွှာတွင် ရေးသား ဖော်ပြထားသည်။
လွှတ်တော်များတွင် ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီ၊ ပြည်သူ့ ငွေစာရင်းကော်မတီ၊ လွှတ်တော်အခွင့် အရေးကော်မတီနှင့် အစိုးရအာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေး ကော်မတီဆိုသော လွှတ်တော်ကော်မတီ ၄ ရပ်ကို ဖွဲ့စည်းမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ကော်မတီများတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများကို ပြင်ပသို့ ပေါက်ကြားခြင်းမရှိစေရန် လျှို့ဝှက်ထားရမည်ဟု ဥပဒေများတွင် တရားဝင်ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
အစိုးရသစ် လက်ထက်တွင် သတင်းမီဒီယာများကို လွတ်လပ်ခွင့် မပေးနိုင်သည့်အပြင် ပိုမိုတင်းကျပ်သော ထိန်းချုပ်မှုများ ပြုလုပ်လာနိုင်သည်ဟုလည်း သတင်းသမားများက ပြောဆိုနေကြသည်။
“အခြေအနေက ပိုပြီးတောင် ကျပ်လာမယ်ထင်တယ်။ အထူးသဖြင့် အစိုးရနဲ့ လွှတ်တော်အကြောင်း ရေးဖို့ တော်တော် ခက်မယ်။ အစိုးရကို ဝေဖန်ဖို့မပြောနဲ့ သူတို့ဆီကရတဲ့ သတင်းတောင် စိစစ်ရေးက လွှတ်ပေးပါ့မလား။ အခုအချိန်ထိတော့ စိစစ်ရေးက တင်းကျပ်နေတုန်းပဲ” ဟု အမျိုးသမီး အယ်ဒီတာတဦးက ဆိုသည်။
စာပေစိစစ်ရေးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဗိုလ်မှူးတင့်ဆွေသည် ဒု ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဖြစ် ရာထူး တိုးမြှင့်ခြင်း ခံထားရပြီး သူ၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးနေရာတွင် ရေတပ်မှ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး မျိုးမြင့်မောင်ဆိုသူကို အစားထိုးခန့်ထားလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း မီဒီယာ အသိုင်းအ၀န်းမှ သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာ ထုတ်ဝေခွင့်မရသေးဘဲ အပတ်စဉ်ထုတ် ဂျာနယ်နှင့် လစဉ်ထုတ် မဂ္ဂဇင်းများကိုသာ စစ်အစိုးရ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ရေးသား ထုတ်ဝေခွင့် ရရှိသည်။
Posted by FBA301 at 9:18 PM0comments
လူကြိုက်အများဆုံး ဆောင်းပါး ။
မော်စကိုရောက်စစ်ခွေးများ အတွက် အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
မော်စကိုရောက်စစ်ခွေးများ အတွက် အိတ်ဖွင့်ပေးစာ !! ရုရှားရောက်စစ်ခွေးများ မင်္ဂလာပါ ။ ကျနော့် ဘလောဂ် ကိုဝင်ဖတ်တဲ့ သူတွေရဲ့ IP တွေမှာ ရုရှား...
အမိယုတ် စစ်ခွေးသားများ လူတွေအားလုံးမှာ မွေးကတည်းက တတိယမျက်လုံးဆိုတာ ပါလာခဲ့ပြီးသာပါ လူတွေရဲ့စိတ်ပေါ့ အဲ့ဒီ စိတ်ဟာ အကောင်း အဆိုး အမှားအ...
ပြည်သူတွေ မျက်စိကန်း နားကန်းဖြစ်နေရမယ့် နအဖရဲ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေး နအဖက နေပြည်တော်မှာ ဒီလကုန် (၃၁) ရက်နေ့ကြရင် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးလုပ်မယ်...
မြန်မာနိူင်ငံမှ တရားဝင်လက်နက်ကိုင် သောင်းကျန်းသူကြီးများ .. အပိုင်း ( ၁ )
မြန်မာနိူင်ငံမှ တရားဝင်လက်နက်ကိုင် သောင်းကျန်းသူကြီးများ .. အမေစုလွတ်လာအပြီးမှာ ပြည်တွင်းရှိ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများမှ ပိုပြီးတက်ကြွစွာန...
ရှားးးးရှားးးးးဘာရှားးးလဲ * ရုရှား* တဲ့ ကွယ် မဆလ စစ်အာဏာရှင် ခေတ် ကာလကတွင် သာမန်စစ်ဗိုလ် တစ်ယောက်အနေဖြင့် နိုင်ငံခြား သို့ ပညာတော်သင် ...
တင်ခဲ့ပြီး ဆောင်းပါး နဲ့ သတင်းများ
နားထောင်ဖြစ်ခဲ့သော အမေစုရဲ့ မိန့် ခွန်း
ခွန်အားသစ်တွေနဲ့ ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ဆီ သို့...
မြဝတီ တိုက်ပွဲ .. ပြောင်းလဲမှု့တွေရှိလာနိူင်မလား ?
အမိမြေကို မျက်ရည် တိတ်စေမှာပါ
"Like" Original Flag
Thet Aung likes
ကလောင်တိုက်ပွဲ ကို ဆက်သွယ်လိုပါက
သက်အောင် ( freeburma301@gmail.com )
ကိုတူး ( freeburma240@gmail.com )
နေလင်း ( freeburma357@gmail.com ) တို့ ကို ဆက်သွယ်နိူင်ပါတယ် ။